Nuxurka Khudbadii Madaxwweyne-SIILAANYO“Somaliland Nin Neceb Iyo Nin Jecelba Waa Cadceed Soo Baxday Oo Aan Sacab Lagu Qarin karin..” | HAYAAN NEWS
Nuxurka Khudbadii Madaxwweyne-SIILAANYO“Somaliland Nin Neceb Iyo Nin Jecelba Waa Cadceed Soo Baxday Oo Aan Sacab Lagu Qarin karin..”
Hargeysa(Hayaannews):- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa sheegay inay Somaliland tahay cad ceed soo baxday oo aan sacab lagu qarin karin,isla markaana waxa uu ka hadlay Sicir-bararka,qiimaha sarifka dollarka, Biyo-qabasho iyo ka hor-tagga Abaaraha soo noqnoqda iyo arrimo kale.
Madaxweyne-SIILAANYO waxa uu sidaa ku sheegay khudbad uu maanta u jeediyay dadweynaha Somaliland Xuska sannad-guurada 26aad ee ka soo wareegtay markii Somaliland dib ula soo noqotay xorriyadeedii 18 May 1991-kii.
Khudbadda Madaxweyne Axmed-Siilaanyo Maanta Warbaahinta u mariyey Bulshada Somaliland oo aan sannadkan siday dawladdu go’aamisay samaynin Dabbaal-degyadii hore loo samayn jiray maalintan oo kale, balse dawladdu go’aamisay in lagu beddelo Qaadhaan-ururin, ayaa Nuqul ka mid ah oo Qoraal ahaan Madaxtooyada kaga soo baxay oo Khudbaddiisa ka mid ahi waxa uu soo gaadhay Warbaahinta Hayaannews, waxaanu Qoraalka Khudbaddiisu u dhignaa sidatan:-
“Khudbada madaxweynaha oo dhamaystiran halkan kaga bogo
Qoysaskii aynu xilliga abaarta caawinaynay, waxay soo doogeen iyagoo badi caydh ah, xeradii xooluhu uga buuxi jireen ay madhan tahay, oo cuud iyo calaf kalena aan haysan. Haddaba, markii aan arkay duruufta dalku ku jiro, waxaan garwaaqsaday in loo baahan-yahay in mar labaad aynu samayno gurmad qaran. Sidaa darteed, waxaan u beddelay debaaldegii iyo damaashaadkii 18-ka May, oo ahayd munaasibaddii qaranka, qaadhaan ururin ballaadhan oo aynu ku taageerno dadkeenna tabaalaysan.
Guddidan, waxaan u xilsaaray, qaadhaan ururin ballaadhan oo ka bilaabanta dalka oo dhan maanta oo ay bishu tahay 18-ka May illaa 26-ka June 2017. Qaadhaan ururintan oo socon doonta muddada 45-ka cisho, waxa lagu fulin doonaa mashaariic lagaga soo kabto abaaraha, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
In lagu celiyo dadkii ka barakacay deegaankoodii. 2. In loo iibiyo xoolo nool dadka caydhoobay, gaar ahaan kuwa ugu jilicsan. 3. In la qodo ceelal biyood, iyo balliyo biyaha socda lagu qabto. 4. In la xidho seerayaal badan oo lagu baxsado xilliga jiilaalka. 5. In dadka aan awoodi karin laga caawiyo qodaalka beeraha xilli roobaadkan.
Waxay ummaddi asaageed ku gaadhi kartaa, aqoon, iskaashi, iyo isku duubni. Sidaa darteed, waxaa inala gudboon:- 1. In aynu midayno maskaxdeenna, muruqeenna iyo maalkeenna. 2. In aynu kor u qaadno wada jirkeenna, iyo waddan jacaylkeenna, isla markaana aynu ubadkeenna ku ababino arrimahaa.
In aynu wax weyn ka beddello qaabkii aynu xoolaha u dhaqan jirnay, ee aynu ka dhaxalnay awoowayaasheen. 4. In aynu xoog saarno wax soo saarka beeraha iyo kalluunka.
In aynu la nimaadno qorshayaal aynu ku qabanno biyaha badan ee badda ku shubma. 8. In aynu dhaqan gelinno wareegtooyinkii aanu soo saarnay ee lagu daryeelayey daaqa, duur-joogta iyo deegaanka.
In aynu abuurro mashaariic salka ku haysa isku tashi iyo iskaa wax-u-qabso, taas oo waajib ka dhigaysa in arday kasta oo ka soo baxa Dugsi Sare, ama Jaamacadda Heerka Koowaad ka qalin jabiya, in uu qarankiisa u shaqeeyo wakhti xaddidan oo xeer jideeyey. 11. In aynu ba’abiinno xidhmooyinka dhulka sharci darrada ah, isla markaana aynu soo celinno nidaamkii seerayaasha.
In aynu dhiiri-gelinno, isticmaalka Cumladdeena, isla markaana ummad ahaan isugu naxariisanno sicirka badeecadaha suuqa. ALLAHEEN BAA GALAD LEH, GOBONNIMANA SHACBIGA SOMALILAND BAA LEH.” Sidaa ayuu Khudbaddiisa ku yidhi Madaxweyne Axmed-Siilaanyo.”